ALAKAMISY 23 SEPTAMBRA - ALAROBIA 29 SEPTAMBRA 2021
ANDRON’NY MPONINA ANTSIRANANA : Naverina an-kianja indray ny fandrindram-piterahana
Tao anaty fahanginana sy fahatsorana noho ny hamehana ara-pahasalamana no nanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny mponina tany amin’ny faritra Diana, teo ambany fitarihan’ny fitaleavam-paritry ny mponina. Tsy nisy ny lanonana mafana toy ny mahazatra fa nisy kosa ireo hetsika vitsivitsy nentina nanamarika izany andro izany. 29 juillet 2021
Hofaranana amin’ny sabotsy 24 jolay ho avy izao ireo hetsika ireo ao Antsiranana, raha toa ka efa tamin’ny 11 jolay no nanombohana izany. Hetsika vitsivitsy noho izany no nokarakaraina nentina nanatanteraka izany tao an-tampon-tanànan’ Antsiranana, ka ankoatra ny fanarahana ny hafatra ampitain-davitra nataon’ny Minisitra mpiahy tamin’ny alalan’ny « visio-conference », dia nisy ihany koa ireo hetsika samihafa notanterahina tamin’ny alalan’ny fanentanana sy adihevitra nisokatra ho an’ny besinimaro.
Ny fihaonana rehetra natao sy izay mbola hotanterahina dia nafototra tamin’ny fandrindram-piterahana sy ny fampandrosoana. Ny lohahevitra nofidiana tamin’ity taona ity moa dia ny hoe « Tombony amin’ny fiovan’ny rafitry ny mponina : lalam-piovana sy fiadanan-tsaina. Zo sy adidy mazava no vahaolana ». Nifarimbona tamin’izany ireo mpiara-miombon’antoka sy fikambanana vitsivitsy, ka nokasihana avokoa ireo sokajin’olona samihafa.
Ireo ray tompon’andraikitra no nokendrena voalohany tamin’ny adihevitra, saingy tamin’ity indray mitoraka ity dia ry zareo mihitsy no nanazava tamin’ireo reny mikasika ny mahazava-dehibe ny fandrindram-piterahana. Nasiana tsindrim-peo manokana tamin’izany fa rehefa voarindra ny isan’ny mponina dia mitombo ho azy ny toe-karena.
Nanaraka izany, nisy koa ny fihaonana tamin’ireo vehivavy voafonja. Marina fa tsy misy miasa loha amin’ny fiterahana izy ireo ao am-ponja ao ka tsy tokony ho resahina akory ny fandridram-piterahana, saingy nambara tamin’izy ireo fa na dia mivoaka ny toerana misy azy ankehitriny aza izy ireo dia mbola mpandray anjara amin’ny fampandrosoana hatrany, ka tokony hampihatra lalandava ny fandrindram-piterahana .
Fitiavam-bola sy rendrarendra
Ankoatra ireo dia fokontany telo no nanatanterahana adihevitra nifototra tamin’ny lohateny hoe « iza no tompon’andraikitra amin’ny fiterahana misesisesy ». Samy niaro ny tenany sy nifanilika ireo mpandray anjara na lahy na vavy kanefa koa samy niaiky fa tompon’andraikitra tsy afaka miala. Tsikaritra kosa fa efa resy ny tahotra ny hiteny mikasika ny resaka fananahana eo imasom-bahoaka fa nandray anjara mavitrika ireo mpandray anjara.
Ireo fikambanam-behivavy ao amin’ny kaominina ambanivolo Sakaramy-Antsiranana-II no nofidiana hisitraka ny fanentanana amin’ny sabotsy ho avy izao, ka mbola ny fandrindram-piterahana hatrany no hiadiana hevitra. « Noho ny fitiavan-tenanay vehivavy sy noho ny tahotra ny ho tsy ho tian’ny vadinay ary koa ny fitiavam-bola sy rendrarendra diso tafahoatra no mahatonga ny vesatra tsy niriana sy mahatonga ny fahamaroan’ny zaza ateraka », hoy ny renim-pianakaviana iray
Marihina fa ambony be ny tahan’ireo zaza tsy velomin-dray sy reny ao amin’ny faritra Diana, amin’izao fotoana . Ny fombafombam-piarahamonina sy ny tsaho aelin’ny sasany mikasika ny fandrindram-piterahana dia manamafy ilay fitombon’ny mponina tsy araka ny tokony ho izy. Mazava loatra fa misy fiantraikany amin’ny toekarena na fihariana foana izany.
ALAKAMISY 14 SEPTAMBRA - ALAROBIA 22 SEPTAMBRA 2021 (0) 21 septembre 2021 Nandatsaka an-kady ny Firenena !!! RAVALOMANANA MARC (0) 21 septembre 2021 Andihizan’ny jiolahy ny tanànan’i Tsaratanàna VOKATRY NY DELESTAZY (0) 21 septembre 2021 Efa nogiazan’ireo olon-dratsy koa ny zokin’ilay tovovavy hita faty voatetitetika VONO OLONA (0) 21 septembre 2021 Olona tsy ara-dalàna miisa 48 sarona, polisy ny 02 tamin’izy ireo TSY FANDRIAM-PAHALEMANA ETO IARIVO (0) 21 septembre 2021 ALAKAMISY 23 SEPTAMBRA - ALAROBIA 29 SEPTAMBRA 2021 (0) 27 septembre 2021